Home Wararka Dowlada Shiinaha oo ergay cusub u soo magacaawday Geeska Afrika
Dowlada Shiinaha oo ergay cusub u soo magacaawday Geeska Afrika
Dowlada Shiinaha ayaa Xue Bing u soo magacawday in uu noqdo ergay uga wakiil noqon doona Geeska Afrika. Wadamada Geeska Afrika oo ay colaaduhu ka jiraan sida Itoobiya,Eriteriya iyo Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada uu ergeygan cusub ka howlgali doono.
Xue ayaa horay uga soo noqday safiirka Shiinaha u fadhiya Papua New Guinea, waxaana uu khibrad u leeyahay ka shaqeynta Afrika, Ameerika iyo Oceania,sida ay shaacisy Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaaqay bishii Janaayo mar uu safar ku marayay bariga Afrika in magacaabista noocaan ah la qorsheeyay.
“Shaqadiisu waxay noqon doontaa in uu ka shaqeeyo horumarinta qorshaha nabadeed ee Shiinaha ee gobolka kaas oo ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo wadamada gobolka si ay u helaan xasillooni, horumar iyo barwaaqo mustaqbalka fog,” ayuu yiri afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Wang Wenbin.
Previous articleGoobaha ganacsiga ee magalaada Jowhar oo maanta albaabada loo xiray
Next articleDab qabsaday saldhig ay leeyihiin ciidamada AMISOM
Cali M. Geeddi oo ku dhawaaqaya in uu yaha musharax 2021.
(Deg Deg)Madaafiica lagu garaacay garoonka Adan Cadde & xerada Xalane